'ကျွန်တော်တို့လို အသစ်တွေအတွက် ဇာတ်ရုပ်တွေ အများကြီး ကျွန်တော်တို့ဆီကို မလာပါဘူး' သရုပ်ဆော? - Yangon Media Group
‘ကျွန်တော်တို့လို အသစ်တွေအတွက် ဇာတ်ရုပ်တွေ အများကြီး ကျွန်တော်တို့ဆီကို မလာပါဘူး’ သရုပ်ဆော?
အနုပညာလောကကို ဝင် ရောက်ရာမှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အ ခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သရုပ် ဆောင် ထူးအောင်ကို ယခုလိုမေး မြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး- ဒီလောကထဲကို ဘယ်လိုခံ ယူချက်နဲ့ဝင်လာတာလဲ။
ဖြေ- ကျွန်တော်စဝင်လာတဲ့ အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကတော့ခံယူချက်တွေစဉ်းစားထားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လို အသစ်တွေအတွက် ဇာတ်ရုပ်တွေအများကြီး ကျွန်တော်တို့ဆီကိုမလာပါဘူး။ ဒါရိုက်တာအလိုအတိုင်းလုပ်ရ တာတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ရလာတဲ့ဇာတ်ရုပ်တွေကိုပဲ အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကိုပဲထားရပါတယ်။
မေး- အသစ်တစ်ယောက် အနေ နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေ ရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ- ကျွန်တော်တို့အသစ်တွေ အနေနဲ့အများကြီးခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပရိုဂျူဆာတွေ ဒါရိုက်တာတွေ ဓာတ်ပုံဆရာတွေမသိကြဘူး။ သူတို့သိအောင် ကျွန်တော်တို့က ဖြည်း ဖြည်းချင်းလုပ်ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့အများကြီး ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒါရိုက်တာ တွေလည်း ကျွန်တော်တို့ကိုမသိကြဘူး။ ပရိသတ်တွေကလည်း မသိကြပါဘူး။ အဲဒီအခါမှာ ကျွန် တော်တို့အသစ်တွေခံစားရတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါ ကကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန် တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေက သေးသေးလေးလေးတွေပဲဖြစ်ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ကို အားပေး ပေးပါ။ တစ်ခါတစ်လေ အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျတာတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ်ကအများကြီးကြိုးစား နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဖိနှိပ်ခံရတာတွေအပြောခံရတာတွေရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်စဉ်းစားမိတာက ငါများသူတို့ပြောသလိုဖြစ်နေပြီလားဆိုတာတွေကို လည်းစဉ်းစားမိပါတယ်။
မေး-‘မ’ရဲ့အေးခဲသွားကြသူများ ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တယ်လို့သိရတယ်။
ဖြေ-ဒါရိုက်တာကိုသီဟကျော်စိုးက ကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ဖို့ရှိတယ် စိတ်ဝင်စားလားဆိုတော့ ကျွန်တော်ကလည်း ကိုယ်မလုပ်ဖူးသေးတဲ့ကာရိုက်တာဆိုတော့ရိုက်ကြည့်ချင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ပါဝင် ဖြစ်တာပါ။ ကာရိုက်တာကလည်း ဗီလိန်တစ်ယောက်နေရာကသရုပ် ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့မင်းသားလေးယောက်။ မင်းသမီးကတော့ ချောကလျာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာ သရုပ်ဆောင် ကိုဥက္ကာမင်း မောင်နဲ့အတူ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်ကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။
မေး-ဘော်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ရောဘယ်လိုတွေ လေ့ကျင့် ဖြစ်လဲ။ အရင်ကပိန်တယ်နော်။
ဖြေ- ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အရင်ကပိန်ပါတယ်။ အဲဒါကို လူ တွေကပိန်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါကို မခံချင်ဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်။ အခုတော့ခန္ဓာကိုယ်က အနေအထားတစ်ခုတော့ဖြစ်လာပါပြီ။ အဲဒါကိုပဲ ကျွန်တော်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမှာပါ။ လေ့ကျင့်မယ်။ နောက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကမင်းသား တွေလည်း မိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြချင်တယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အများကြီးလို ပါ သေးတယ်။
မေး-ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကား တွေ ရောဘယ်နှကားလောက်ရှိလဲ။
ဖြေ-ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအနေနဲ့ ၁ဝကားလောက်ရှိပါပြီ။ ဗီဒီယိုကတော့ နှစ်ကားလောက်ရှိပါပြီ။
မွန်ပြည်နယ်၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေ စာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်(Citizen's Budget) စာေ
ယူနက်စကို အဖွဲ့ကြီးမှ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ နုတ်ထွက်မည်